अर्जेन्टिनाका फूटबल दिग्गज डिएगो अर्मान्डो माराडोना विभिन्न कारणले बेलाबेलामा चर्चामा आइरहन्छन् । रुस विश्व कपमा पनि उनको चर्चा कम रहेन । उनी कहिले आफ्ना केही टिप्पणीका कारण चर्चामा आए भने कहिले खेल हेर्दा हेर्दै उत्तेजित...
उसबेला रोल्पा प्रवेश गर्न ‘कमरेड’हरूको अनुमति चाहिन्थ्यो। अब रोल्पा प्रवेश गर्न कसैको ‘अनुमति’ चाहिँदैन। नेपालमा कुनै बेला चरम युद्ध पनि भएको थियो र हजारौं मानिस मारिएका थिए भन्ने कुरा सहरले झन्डैझन्डै बिर्सिसक्यो। तर रोल्पाका...
माओत्सेतुङ र चे ग्वेभाराले झण्डै एक दशकको अन्तरमा आआफ्नै मौलिकतामा कम्युनिस्ट क्रान्ति गरेका थिए । चीनमा माओको नेतृत्वमा सन् १९४९ मा क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो भने क्युवामा फिडेल क्यास्त्रो र चे ग्वेभाराको नेतृत्वमा सन् १९५९...
नेपालमा लाख वरपर तलब हुने मानिसहरु साथीहरुको इष्र्याको पात्र हुन्छन् । समाजमा उनीहरुलाई सफल मानिन्छ । तर संसारमा एक यस्तो शहर पनि छ जहाँ सवा करोड कमाउने मानिसलाई पनि गरिब सम्झिइन्छ । यो अमेरिकाको सान...
पछिल्लो समय अमेरिकी डलर बलियो भएको छ । यसको कारणले भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, इन्डोनेसिया र नेपालका मुद्राहरूको स्थिति राम्रो छैन । तथापि अमेरिकी डलरको बलियो अवस्थाको चपेटामा यी देशका मुद्रा मात्र परेका होइनन् । इरानको मुद्रा...
माओको दिन नै रातिबाट सुरु हुन्थ्यो । उनी पूरै रात काम गर्थे भने बिहानतिर सुत्न जान्थे । उनको धेरैजसो समय ओछ्यानमा बित्थ्यो । यहाँसम्म कि खाना पनि उनी ओछ्यानमै खान्थे । उनीसँग आफू सुत्ने...
यसरी कम्युनिस्ट भएँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना वि.स. ००६ सालमा भयो । पुष्पलाल श्रेष्ठसहित चार युवा नेताले पार्टी स्थापना गरे । ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव केशरजंग रायमाझी दरबार छिरे । त्यसपछि मुलभूत...
छिमेकी देश भारत महिलाविरुद्ध यौन हिंसाको लागि संसारकै सबभन्दा खतरनाक देश भएको हालै एक अध्ययनले देखाएको छ । थोम्पसन रोयटर्स फाउन्डेसन नामको अध्ययन संस्थाले गरेको अध्ययनले भारत पछि यो विषयमा अफगानिस्तान, सिरिया, सोमालिया, साउदी...
एशियाका बाघ भनेर चिनिने दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र ताइवानले कसरी विकासमा छालाङ हाने ? हेराैं रोचक इतिहास
नेपालको राजनीतिक वृत्तमा समय समयमा ‘एकै पुस्तामा समृद्धि हासिल गर्ने’, ‘हाम्रै पुस्तामा सम्पन्न राष्ट्र बन्ने’ कुरा उठ्छन् । अघिल्लो आम निर्वाचनमा केही नयाँ राजनीतिक शक्तिले त यसलाई निर्वाचनको नाराकै रूपमै अघिसारेका थिए । तर विश्वमा...
म्याराडोनाको हातमा नेपाली झण्डा फहराएपछि ………!
अर्जेन्टिनामा पहिलोपटक पाइला राख्दा सुरेश केसी २४ वर्षका थिए । त्यो सन् १९९९ को कुरा हो । अहिले त्यहाँ स्थायी रूपमा बस्ने नेपालीको संख्या ५० पनि पुगेको छैन । त्यतिबेला कति थिए होलान् ?...